Sida loo beddelo caliper disc brake - Shanghai KTG Auto Technology Co., Ltd.
Guud ahaan, calipers-ka bireega waa kuwo la isku halayn karo, waxayna u baahan yihiin in wax badan laga beddelo suufka iyo saxannada, laakiin haddii ay tahay inaad mid beddesho, waa tan sida loo sameeyo!
Waxa jira meelo badan oo kala duwan oo lagu xidho biriiga, laakiin inta badan kiisaska, baabuurta waxa lagu rakibaa hal biistoon calipers kuwaaso guud ahaan si isku mid ah ugu xidhan.Caliper-ku waxa uu ku xidhan yahay qaade ku xidhan xudunta gaadhiga.Inta aad si gaar ah u bedeli karto suufyada iyo saxanadaha mar walba waxay u baahan yihiin in lagu beddelo laba-labo oo ka gudba dabada.
Ha isku dayin inaad beddesho caliper ilaa aad taqaanid waxaad samaynayso, ama aad leedahay kormeer khabiir.Ma qaadi kartid khatar wax kasta oo ka mid ah nidaamka baabuurka baabuurka.
Si badbaado leh u xidh baabuurka, adoo isticmaalaya godadka faashashka iyo godadka taayirrada, oo ka saar wadada.giraangiraha
Side badanaa waxa lagu xidhaa xuddunta oo leh laba boolal, kuwan waa lagaga tagi karaa meesha haddii aad kaliya bedelayso caliper-laakin waxa ay u baahan doonaan in laga saaro haddii aad sidoo kale beddesho saxanka.
Caliper-ku waxa uu ku xidhan yahay qaadaha oo leh laba boolal, oo badiyaa leh madax Allen, kuwaas oo ku xidha laba biin oo simbiriirixan ah oo ku dhex jira jidhka caliper.
Markaad ka saarto boolalka Allen waxaad awoodi doontaa inaad si taxadar leh uga abaalmariso caliper-ka saxanka.Waxa laga yaabaa inay dhib badan tahay in meesha laga saaro, markaa ka taxdar haddii aad isticmaalayso bar-jare.
Marka caliper la saaro suufka ayaa soo bixi doona - inta badan waxaa lagu hayaa meel lagu dhejiyo.
Xariiqda biriiga waxay u baahan tahay in si taxadar leh looga saaro caliper.Waxaad u baahan doontaa weel si aad u qabato dareere kasta oo bireega ka daadanaya (ha helin tan rinjiga).
Caliper-ka cusub hubi in piston-ku dib loogu riixo dhululubada iyada oo wadata labo qalab oo bamka biyaha ah, G-clamp, ama la mid ah.Biistoonada danbe ayaa inta badan ah nooca 'dabaysha-dhabarka' waxayna u baahan yihiin in dib loogu riixo dhululubada iyadoo la adeegsanayo qalabka dabaysha ee biriiga.Kuwani waa raqiis in la gato, waana fududahay in la isticmaalo.
suufka ayaa markaa dib loogu dhejin karaa caliper (oo leh biinanka lagama maarmaanka ah ama biinanka) iyo caliper ayaa lagu dhejiyaa sidaha.
Dib u hagaaji boolal-is-jiidjiideedka caliper oo hubi inay si fiican u socdaan oo si habsami leh u simbiriirixan.
Gadi xudunta oo hubi in calipers-ku ay si sax ah ugu yaalliin saxanka, iyada oo aan lahayn wax ku xidhan (qaar ku xidhid iftiin ah ayaa la filayaa).
Iyada oo dhammaan boolalku ay sugan yihiin tuubada bireega waxay u baahan tahay in dib loogu dhejiyo, oo caliper-ku uu dhiigbaxo si uu hawada uga saaro.
Raac habka caadiga ah ee dhiigbaxa (ama xirmo hal qof ah, ama caawinta kaaliye, oo hubso inaad kaydka dareeraha biriiga kor u kacdo ilaa heerka saxda ah.
Hubi dhammaan boolasha ka hor inta aanad dib ugu xidhin shaagagga oo aad u rujin boolalka/lafaha giraangiraha ilaa heerka la cayimay.
La soco in baabuurka biriiga uu u baahan karo dhowr 'bambooyin' si ay suufka ula xiriirto saxanka.Si taxadar leh u wad oo xaqiiji in biriiga ay si sax ah u shaqeyso.
Caliper Semi Loaded Jak Brake Caliper CalipersBeenka Teal Caliper go'an Saxanadaha biriiga iyo Qiimaha Calipers Caliper Saab